Olona niara-nihinana lasopy taminy tao amin’ny toeram-pisakafoanana Sinoa iray teo an-toerana ihany no namono azy. Ny kitapo teny aminy sy ny scooter izay nentiny no lasan’ireo olon-dratsy miisa roa izay heverina fa mahafantatra azy ihany. Nitondra vola tamin’ny sakaosy ity lasibatra no notanarahan’ireo jiolahy ka izao namoy ny ainy izao, raha ny resaka nandeha. Noho ny hery tsy mitovy, nitazam-potsiny ireo mpandalo sy ny mponina teny amin’ny faritra 67ha. Efa nanjavona niaraka tamin’ilay scooter sy ny vola ireo jiolahy vao tonga ny polisy noho ny fahataran’ny antso. Raha nitafa manokana tamin’ny mpitandro filaminana dia nilaza izy ireo fa mbola manatanteraka ny fizahana sy ny fanarahan-dia ny polisy eo 67ha. Amin’izao ankatoky ny fety izao, mirongatra ny tsy fandriampahalemana, ankoatra ny fanjavonana zaza. Nahazo vahana indray ny fanafihana mitam-piadiana. Mihevitra ny mpanara-baovao fa vitsy loatra ireo mpitandro filaminana manao fanamiana sivily. Na tsy manao akanjo ana mpitandro filaminana aza izy ireo dia fantatry ny jiolahy tahaka ny hety volo.